IVA 3T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
စံနှုန်း- ISO 9001-2015
မော်ဒယ်- IVA 3T
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရခေဲထုတျစကျ ,	၂၀,၀၀၀ USD ဒေါ်လာအောက် ,	Hot
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA3T
IVA3T 3ton exported ice making machine (100% New) is supplied with high quality and at the most competitive price in the South East Asian market.
IVA3T ၃ တန် တင်ပို့ထားသော ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)ကို အရှေ့တောင်အာရှ ဈေးကွက်တွင် အရည်အသွေးမြင့်မြင့်ဖြင့် ဈေးနှုန်းချိုသားစွာ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
Video ofa3T ice-making machine
In summer, the ice always becomes scarce due to its dramatically increasing demands and insufficient supply capacity of the small-scale manufacturers. Thus, investing in this industry should beasmart choice for an investor.
နွေရာသီမှာ ရေခဲကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲကြပြီး စက်တွေက အနည်းငယ်သာ ထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့် ရေခဲရှားပါးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စက်ရုံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းက မြုပ်နှံသူအတွက် ကောင်းသော ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
If you are in need of tube ice of big volume for manufacturing, preservation, or even business purpose, Viet An’s Industrial ice-making machine will be the best choice for you. To know more details about this product, go through the article below.
တကယ်လို့သင်က ရေခဲတုံးအကြီးထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ Viet An ရဲ့ စက်ရုံသုံးရေခဲထုတ်စက်က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Why should you choose Viet An’s IVA3T 3ton Stainless Steel Tube ice making machines?
Viet An ရဲ့ IVA 3T ၃ တန် စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ကို သင်ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်တာလဲ?
Viet An General Trading Joint Stock Company is one of the leading company in supplying industrial tube ice making machine in the market
Viet An အထွေထွေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီက ဈေးကွက်တွင် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်တွေကို ပေးပို့တဲ့ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The company was established under the business license No. 013039593 by Hanoi Department of Planning and Investment on August 4, 2009. Third amendment registration was on November 4, 2015, under the business license No. 0102966635. Asaleading enterprise with nearly 20 years of experience in importing, manufacturing and distributing filling machines, bottle blowing machines, water filtration lines, manufacturing stainless steel ice machines, etc., we’ve always tried our best to apply the most advanced technology (American, European, Japanese technology) into the production. Thanks to our unceasing efforts, we have achievedavariety of honorable prizes and certificates:
ဒီကုမ္ပဏီက ရေခဲထုတ်စက်၊ RO ရေစစ်၊ ဘူးတွေကို လောင်းဖြည့်ပေးသောစက် စတာတွေကို ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့ နေရာမှာ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ VA, USApec, Vinaro စတဲ့ တံဆိပ်တွေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ဟနွိုင်း စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဋ္ဌာနရဲ့ စီးပွါးရေးလိုင်စင်အမှတ် ၀၁၃၀၃၉၅၉၃ အောက်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်ခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပြီး စီးပွါးရေးလိုင်စင် နံပါတ် ၀၁၀၂၉၆၆၆၃၅ အောက်တွင် ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေတံဆိပ်ဆု- ဗီယက်နမ် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်စည်များ ဆု(၂၀၁၅)
IVA3T 3TON INDUSTRIAL TUBE ICE MAKING MACHINE (100% New )
IVA 3T ၃ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)
IVA3T 3ton Stainless Steel Tube ice making machine is produced according to the most advanced technology of the United States by Viet An General Trading Joint Stock Company. With smart and compact design, the machine offers an easy installation, safe and stable operation, low maintenance cost and energy saving. The new compressor is produced with Germany technology, generating less operation noise.
IVA 3T ၃ တန် စတိန်းလက်စ်စတီး စက်ရုံသုံးစက်ကို Viet An ကုမ္ပဏီမှ US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံးနည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ စမတ်ကျပြီး သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းကြောင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူတယ်။ လုံခြုံစိတ်ချရတယ်။ တည်ငြိမ်စွာ လည်ပတ်တယ်။ ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ အင်နာဂျီကိုလည်း ချွေတာနိုင်တယ်။ ဂျာမနီ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဖိသိပ်စက်အသစ်က ဆူညံမှုနည်းစွာာ လည်ပတ်ပါတယ်။
With the utilization of purified water source, the machine brings ten finest quality of the finished products, ensuring6-1:2010 /BYT standards of the Ministry of Health,
Thanks to its 304 Stainless Steel material and the components coated with double layers of anti-corrosive epoxy coating, the machine is durable in Vietnam’s severe weather.
ရေသန့်အရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုတာကြောင့် စက်က ရေခဲအတွက်အကောင်းဆုံး ကွာလတီ ၁၀ ခုကို ယူဆောင်လာပေးပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီစေပါတယ်။ သံချေးမတပ်စေတဲ့ နှစ်ထပ်အလွှာအုပ်ထားတဲ့ 304 စတိန်းလက်စ်စတီး ပစ္စည်းနဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကြောင့် စက်က ဗီယက်နမ်ရဲ့ ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုမှာ ကြာရှည်ခံပါတယ်။
ဖိသိပ်စက်(ပိတ်ထားသော) (၁၀၀% အသစ်)
ဖိသိပ်စက်တွေရဲ့ လျှပ်စစ်အဆို့စနစ်ကို Finland မှာရှိတဲ့ Danfoss ကုမ္ပဏီကမှ တင်သွင်းထားပါတယ်။
အရည်နှင့် အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသောာ စနစ် အသစ်
Only in Viet An, we apply 100% new liquid and gas separation systems for the ice making machine. The air compressor is used for the ice-making machine. The liquid and gas separation system is designed to separate liquid from the inlet air to ensure no liquid remains in the air before it is routed into the airline in order for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life. As you might know, the ice making machines using old technology often have lengthy designed lines. However, with Viet An’s innovation, the traditional lines have been improved to be much more compact and convenient.
Viet An ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကသာ ရေခဲထုတ်စက်မှာ အရည်နဲ့ အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသောစက်ကို ၁၀၀% အသစ် အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Viet An ၏ ဆန်းသစ်မှုကြောင့် ခေတ်ဟောင်းလိုင်းတွေကို ပိုပြီး သိပ်သည်းချောမွေ့အောင် တိုးတက်လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အရည်နှင့် အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသောစက်ကို လေလက်ကြားမှ အရည်တွေကို ခွဲထုတ်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒါမှ လေလမ်းကြောင်းမှာ မလည်ပတ်ခင် လေထဲတွင် အရည်မကျန်မှာ သေချာစေပါတယ်။ သို့မှသာ ဖိအားသိပ်စက်က ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်ပြီး သက်တမ်းလည်း ရှည်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခိုးကို အရည်ပြောင်းလဲပေးသောစက်နှင့် အေးစေသော တာဝါ (၁၀၀% အသစ်)
ရေခဲထုတ်စက်တွင် အသုံးပြုသော အခိုးကို အရည်ပြောင်းပေးသည့်စက်၏ ပုံ
ရေခဲထုတ်စက်တွင် အသုံးပြုသော အေးစေသောတာဝါ၏ ပုံ
ရေခဲထုတ်စက်တွင် အသုံးပြုသော အခိုးကို အရည်ပြောင်းပေးသောစက်နှင့် အေးစေသောတာဝါ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို Viet An မှ အကောင်းဆုံးသော ကွာလတီ၊ အချိုသာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ တင်ပို့ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်က လုံးဝကို အော်တိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ စက်က ခလုတ်အဖွင့်အပိတ် တစ်ခုတည်းနဲံ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ စနစ်က လျှပ်စစ်ပြသနာ ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမှာ ချက်ချင်း ရပ်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဒီစက်ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ လုံခြုံမှုကို ခံစားရမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာ ခေတ်အမီဆုံး အထူးနည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
အရည်နှင့် အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသောစနစ်က လိုင်းအလျားကို လျှော့ချပေးနိုင်တာကြောင့် ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ရေစုပ်စက်(၁၀၀% အသစ်)ကို အထူးနည်းပညာနဲ့အတူ 304 စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
အီလက်ထရောနစ် အဆို့စနစ်ကို Filand မှာ ရှိတဲ့ Danfoss ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းပါတယ်။
The packaging system offers an amazingly quick and convenient operation. When buying the IVA 3T Industrial Tube Ice Making Machine (100% New), you will be givenapackaging system.
Great advantages when using Viet An’s IVA3T 3ton Stainless Steel Tube ice making machine
Viet An ရဲ့ IVA 3T ၃ တန် စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ကို အသုံးပြုသောအခါ ရရှိမည့် ကြီးမားသော ကောင်းကျိုးများ
We have been trying our best to enhance price, incentive policies as well as service quality to meet your requirements. We do hope to bring you the true value through the path to modernity. With the application of the most advanced technology, our machines offer much better energy-saving capacity compared to other machines in the market. (Save 80% compared to purchasing tube ice)
ကျွန်တော်တို့က ဈေးနှုန်းတွေ၊ ပေါ်လစီတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုကွာလတီတွေကို ဝယ်ယူသူရဲ့အကြိုက်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး တန်ဖိုးတွေ ယူဆောင်လာပေးနေတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ နည်းပညာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်တွေက ဈေးကွက်က အခြားစက်တွေထက် ပိုပြီး အင်နာဂျီကို ချွေတာပေးနိုင်ပါတယ်။ (၈၀% ထိ ချွေတာပေးနိုင်တယ်)
We also offerawarranty period of 1 year andalife-long maintenance service, together with dedicated services.
ကျွန်တော်တို့က ၁ နှစ် အာမခံ၊ တစ်သက်တာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးမှုနဲ့ အခြားနှစ်သက်ဖွယ်ရာ ဆားဗစ်တွေ ပေးပါတယ်။
- High speed of ice-making: Only 35-45 minutes/cycle
-ရေခဲထုတ်လုပ်မှု အရှိန်မြင့်ခြင်း- စက်ဝိုင်းတစ်ခုကို ၃၅-၄၅ မိနစ်သာ
- Compact design to suit various space and using purposes
-နေရာမျိုးစုံ၊ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံအတွက် အဆင်ပြေသော သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်း
- High quality ice, ensuring quality standards of the Ministry of Health
-ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီသော အရည်အသွေးမြင့် ရေခဲ
- Genuine components imported from European, meeting ISO 9001:2008 & CE Marking standards
-ဥရောပမှ တင်သွင်းသော ISO 9001:2008 နှင့် CE စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီသော စစ်မှန်သော အစိတ်အပိုင်းများ
- Smart operation mechanism, closed operation cycle to minimize the bacteria
-ဘက်တီးရီးယားကို နည်းစေသော စမတ်ကျသော လည်ပတ်မှု စက်ယန္တရား၊ သီးသန့်လည်ပတ်မှု စက်ဝိုင်း
IVA3T 3ton Stainless Steel Tube ice making machine can be used to produce ice of many different dimension
IVA3T ၃ တန် စတိန်းလက်စ်စတီးရေခဲထုတ်စက်ကို ရေခဲ အရွယ်အစားမျိုးစုံထုတ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်တယ်။
Each ice-making machine can be used to produce ice of one typical. Therefore, the customers should pay attention to this point to select the exact machine. Viet An's IVA3T 3ton Stainless Steel Tube ice making machine can be used to produce ice of following dimension:
-Type 1 is designed with 48 x 80 mm dimension which is suitable for beer or soft drinks. With this type, the ice will not melt quickly. However, due to the big size, it can cause inconvenience sometimes.
- အမျိုးအစား ၁ ကို ၄၈×၈၀ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး ဘီယာ၊ အဖျော်ယမကာတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားနဲ့ဆိုရင် ရေခဲက လျင်မြန်စွာ ပျော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း ကြီးသော အရွယ်အစားကြောင့် တခါတရံ အဆင်မပြေမှုတွေတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
-Type2is designed with 38 x 45 mm dimension which is suitable for iced tea, wine drinking, etc. This size is not too big while it can still keep the ice frozen foralong time.
- အမျိုးအစား ၂ ကို ၃၈×၄၅ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး လက်ဖက်ရည်အေး၊ ဝိုင် စတာတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ အရွယ်အစားက သိပ်မကြီးတဲ့အတွက် ရေခဲကို အချိန်အကြာကြီး ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
-Type3is designed with 34 x 40 mm dimension which is also suitable for iced tea, wine drinking, etc. This size is relatively moderate and is easy to use with the drinks.
- အမျိုးအစား ၃ ကို ၃၄×၄၀ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး လက်ဖက်ရည်အေး၊ ဝိုင်တွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်အစားက သောက်စရာတွေအတွက် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
-Type4is designed with 18 x 30 mm dimensions which best suits coffee, fruit juice, etc. Though the ice melts quicker than3above sizes, this type can make the drinks cool very quick.
အမျိုးအစား ၄ ကို ၁၈×၃၀ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး ကော်ဖီ၊ အသီးဖျော်ရည် စတာတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ အပေါ်က အရွယ်အစား ၃ ခုထက် ပိုပြီး အရည်ပျော်မြန်ပေမယ့် ဒီအမျိုးအစားက သောက်စရာတွေကို လျင်မြန်စွာ အေးစေပါတယ်။
Currently, there are many types of counterfeit products on the market. Therefore, customers should contact the official branches or offices to buy genuine products. Also, ice machines on the market are atavariety of prices. The ice machine's price varies depending on the quality of the device (ranging from one to several hundred million). Choosing products of Viet An, you can feel secure in our excellent product quality.
If you are interested in our products, call us at: +84 839 31 31 31 Your trust is the greatest joy for us.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ +၈၄ ၈၃၉ ၃၁ ၃၁ ၃၁ ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော ပျော်ရွှင်မှုပါပဲ။
KL10 cold storage system
Hỏi đáp & đánh giá IVA3T ၃ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)